बजेट मन्थन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
गतवर्ष ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये कतिले डोजर किने ? संख्या सुनेर सबै जिल्ल हुन्छन् । नीतिगत रूपमा बजेटलाई हेर्ने नयाँ चस्मा लगाउन एकदम आवश्यक छ ।
वैशाख १८, २०७५ सुजीव शाक्य
काठमाडौँ — यस बजेटले अर्थतन्त्रको नयाँ दिशा दिने संकेत गर्छ कि गर्दैन ? हामी नेपाली सांकेतिक कुरामा धेरै विश्वास राख्छौं । जति फोहोर भए पनि, चोखो पानी छर्किदिए पुग्छ, हामीलाई । ट्राफिक नियम वर्षभरि किन पालना गर्ने, ट्राफिक सप्ताहमा माने पुगिहाल्छ ।
एक दिन माछामासु, अन्डा र रक्सी नखाएर धर्म गरेको आभास दिन्छौं । तीजको एक दिन वर्तका निम्ति एक महिना खान्छौं र पिउँछाैं । त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रको चर्चा पनि यो बजेटमासमा मात्र हुन्छ, त्यसपछि वर्षभरि जुन प्रकारका छलफल, सचेतना गर्ने र अवलोकन चाहिन्छ, त्यसो हुँदैन/गर्दैनौं ।
आम जनताले बुझ्ने बजेटको परिभाषा
सबैको आ–आफनो बुझाइ हो । तर जनताले भने गत ७० वर्षको भोगाइले बजेटको यो परिभाषा बुझ्छन् :
ब– बाँड्ने : बजेट भन्ने नै बाँड्ने कुरो हो भन्ने बुझिन्छ । माग गर्दा पनि बजेट छुट्याइदिनुपर्‍यो भनेर माग गर्छौं । राजनीतिक नेताको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्‍यो वा निजी क्षेत्रका संस्थाको वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्‍यो भने पनि राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै बजेट बाँडिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पढ्ने हो भने कसरी र कस्तो गरेर समेत बाँडिन्छ भनेर तीनछक परिन्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बजेट बाँड्न राणाकाल, शाहकालदेखि अहिले लोकतन्त्रमा पनि कसैलाई लाज लागेको छैन । राणाकालमा त अझ जुवा हारे राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तिर्ने तर जिते निजी हुने गथ्र्यो । त्यसकारण अहिलेको सत्तामा बसेका सरकारलाई मात्र आैंला ठड्याउन मिल्दैन ।
जे– जे गरे पनि हुने वा जसोतसो सिध्याउ : असार महिनामा नेपालभरि बाटो खन्ने काम धेरै हुन्छ । बाटो कालपात्रो गर्दागर्दै पानीको भेलसँगै अलकत्रा र गिटी बगेको प्राय: नेपालीले देखेका छन् । दाताहरूले सिकाएझैं घ्वार्र–घ्वार्र सभा–सेमिनार गरेर असार १५ लागेका किसानलाई सहर बोलाई बजेट सकाउने प्रयत्न गरेको पनि देखेका छौं । अचम्मसित कार्यालयमा नयाँ मोटरसाइकल, कम्प्युटर इत्यादि उपकरणहरू देखिन थाल्छ, यो महिनामा । ‘बजेट सकाउनुपर्‍यो’ भन्ने वाक्यांश नसुनेको नेपाली को छ र ? जवाफदेहिता बिना खर्च गर्ने हाम्रो निजी बानी राष्ट्रमा राम्रोसँग सारेका छौं ।
ट– टालटुल गर्ने : केही वर्षअघि असारमा बेँसीसहर जाँदा, बाटो टालटुल गर्ने काम भइरहेको थियो, रोकेर सोध्दा मिठो जवाफ पाएँ । सबै राम्ररी बन्यो भने अर्को वर्ष त ठेका नै पाइँदैन । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टालटुल–कामको राष्ट्रिय प्रतीक हो । टालटुल गर्दागर्दा एयरपोर्ट त बसस्टप जस्तो देखिन थालिसक्यो, आभास पनि त्यस्तै हुन्छ । सिंहदरबारको कार्यालय संरचना हेर्दा हाम्रो टालटुले मनसाय कस्तो छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।
अबको चुनौती भनेको जनताको नजरमा बजेटको छवि परिवर्तन गर्ने हो । चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको अध्ययन र पछि काम गर्दा बजेट एउटा संरचना हो भन्ने बुझियो । बजेट एउटा प्रणाली हो, जसमा पहिले दीर्घकालीन लक्ष्य बनाइन्छ र त्यसलाई वार्षिक रूपमा भाग गरिन्छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक रूपमा योजना बनाइन्छ र रकम विनियोजन गरिन्छ । बजेटको ठूलो भाग ‘बजेटरी कन्ट्रोल’ हो । सिस्टमबाट कसले, कसरी र किन खर्च गर्ने अनि त्यो खर्चलाई अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने सवाल नेपालको अबको संघीय संरचनामा झनै आवश्यक छ । ७५३ वटा सरकारहरूको लेखाजोखा गर्नु अति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
नेपालीले आफ्नो, परिवारको र संस्थाको बजेट बनाउने हो भने राष्ट्रको बजेट बुझ्न सजिलो हुन्छ । रेस्टुराँतिर लाग्दा हामीमध्ये कतिले आज मेरो यो बजेट छ भन्छौं ? पैसा नपुगेर सापटी माग्ने हाम्रो समाजले स्वीकारेको बानी हो । दुई हजारको साडी लिनजाँदा साथीहरूको लहलहैमा पाँच हजारको किनेको वा एक बोतल बियर पिउन जाँदा ब्लेक लेबल र टेकिला चाखेर, एटीएम गएर वा मामालाई फोन गरेर पैसा तिरेका कहानी हामीमध्ये धेरैको छ । हाम्रो व्यक्तिगत बजेट व्यवस्थित नहुँदा हुने घटना हुन् यी ।
अब निजी, पारिवारिक र संस्थागत रूपमा बजेट नै नबनाउने परिपाटीमा देशको बजेटचाहिँ कसरी उच्चस्तरीय हुन्छ ? यो त हामीजस्तो व्यायाम नगर्ने मानिसहरू मिलेर देशको लागि म्याराथन दौडेर पदक आउँछ भनेर आस गर्नु जस्तै हो । हाम्रो पाठ्यक्रममा अब साना कक्षादेखि नै अरू देशमा झैं बजेटबारे पढाउनुपर्छ । लुगा लगाउनुपर्छ, सफा बस्नुपर्छ भनेझैं बजेट बनाउने र बजेटभित्र आफूलाई सञ्चालन गर्ने आधारभूत बानी पनि बसाल्नुपर्छ । तब मात्रै राष्ट्रको बजेट प्रणाली सफल हुन्छ ।
बनाउने मात्र कि भएकालाई सम्हाल्ने ?
घर, रेस्टुराँ र कार्यालयका शौचालयमा भाँचिएको कोमोड, बिग्रिएको फ्लस, यत्रतत्र फोहोर हामी प्रशस्तै देख्छौं । हामी ‘प्रोजेक्ट–मोड’मा सोच्छौं । केही बनाएपछि त्यसको मर्मत–सम्भार सोच्दैनौं । काठमाडौं उपत्यकामा महँंगा–महंँगा लुगाफाटा बिक्री हुने पसल टन्न छन्, बिक्री पनि हुन्छन् । तर ड्राई–क्लिनिङ पसलहरूचाहिँ कम छन् ।
मतलब, महँगो कपडालाई जतन गरेर धुने हाम्रो बानी छैन । यही कुरा हाम्रो विकासको परिभाषामा पनि लागू हुन्छ । विकास भनेको बनाउने मात्र होइन, बनेकोलाई सम्हालेर राख्नु पनि हो ।
होटल व्यवसायसँगको तीन दशकको सिकाइले भन्छ– होटलको सुरुको खर्चको ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भारमा खर्च छुट्याउनुपर्छ । तर नेपालमा एक वर्षअघि बनेको होटल ५ वर्ष पुरानो देखिन्छ । किनकि साहुजीहरू मर्मत–सम्भारमा पैसा खर्च गर्न हिच्किचाउँछन् । निजी क्षेत्रले त तुरुन्त निर्णय लिन चाहँदैनन् भने राजनीतिमा लागेकाले गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्न गाह्रै छ ।
तसर्थ यो बजेटले नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक छ । नयाँ किन्ने कि भएकालाई नै सम्हाल्ने ? सरकारी गाडीहरू यत्रतत्र थन्केका छन्, किन नयाँ किन्ने ? डोजर लगाएर जंगल मास्ने कि भएको बाटोलाई नै प्रयोगयोग्य बनाउने ? बाटो भनेको छिटो र सजिलो बनाउने कि १५ ठाउँ छुने नागवेली बनाउने ? भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययनमा आबद्धहरूका अनुसार सरकारलाई किन्नमा ‘फाइदा’ छ, मर्मत–सम्भारमा खर्च गर्नभन्दा । गाडी किने ठूलै हिस्सा झ्वाम पार्न पाइन्छ, तर सम्भारमा त चालक र तल्लो तहका कर्मचारीको चिया खर्चमात्र आउँछ । साहुजीहरूले पनि पनि यस्तो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । गतवर्ष ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये कतिले डोजर किने? संख्या सुनेर सबै जिल्ल हुन्छन् । नीतिगत रूपमा बजेटलाई हेर्ने नयाँ चस्मा लगाउन एकदम आवश्यक छ । विकासको परिभाषा बदल्न एकदम आवश्यक छ ।
नेपालमा प्राय: बजेटको भाषणको टिकाटिप्पणी गर्ने दशकौंदेखि उही अनुहार छन् । यस पटक नयाँ पिढीका अर्थ विश्लेषकहरूका अनुहार देख्ने ठूलो आशा छ । नेपाल एउटा कोरिया बन्ने तगारोमा छ, हामी आशा गरांै, दक्षिण कोरिया बन्नेतर्फ लाग्छांै, नकि उत्तर कोरिया । अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातिर लाने संकेत यो बजेटले दिन सक्छ । यसले विदेशी, स्वदेशी र विश्वभर फैलिएका लगानी गर्नसक्ने नेपालीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रमा अंकित दिगो समाधानका संकेत हेर्न आतुर छौं, हामी ।
प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:०३
आश्विन ५, २०७४ सुजीव शाक्य
काठमाडौँ — बैंककको एमबीके मार्केट, खावसान मार्केट वा प्रातुनाम मार्केटतिर जाँदा नेपाली गीत र नेपाली भाषा सुनेर सबै अलिक स्तब्ध हुने गरेको देखिन्छ । भारतीय र नेपाली पर्यटकले मनपराउने बजारहरूमा नेपाली वा हिन्दी बोलेर थाई भाषा पनि बोल्ने, बुझ्ने र बोल्नेसँग किनमेल गर्न कति सजिलो भनेर धेरैले भन्छन् ।
बैंककको एमबीके मार्केट, खावसान मार्केट वा प्रातुनाम मार्केटतिर जाँदा नेपाली गीत र नेपाली भाषा सुनेर सबै अलिक स्तब्ध हुने गरेको देखिन्छ। भारतीय र नेपाली पर्यटकले मनपराउने बजारहरूमा नेपाली वा हिन्दी बोलेर थाई भाषा पनि बोल्ने, बुझ्ने र बोल्नेसँग किनमेल गर्न कति सजिलो भनेर धेरैले भन्छन्।
मेरा थाई साथीहरू प्रश्न गर्छन्– के नेपालीहरू संसारभरि व्यापार गरेर हिँड्ने जाति हो? कम्बोडियाको राजधानी नोमपेनमा प्राय: सबै इन्डियन रेस्टुरेन्टहरू नेपालीहरूकै छ। कम्बोडियन साथीहरूले मलाई सोधे– नेपालीहरू रेस्टुरेन्ट व्यवसायी हुन् र? अमेरिका र युरोपमा इन्डियन रेस्टुरेन्ट भन्ने बित्तिकै नेपालीले चलाएको वा नेपाली कामदारहरूको बाहुल्य रहेको पाइन्छ।
अफ्रिकाको रुवान्डा र अन्य अफ्रिकी देशहरूमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघसँग आबद्ध संस्थाहरूमा नेपालीहरूको बाहुल्यले गर्दा नेपालीहरूको चिन्हारी नै अर्को छ। जिम्बाब्वेमा त राष्ट्र संघको प्रमुख नै नेपाली छन्। हामी आफैं पनि रुवान्डामा पाँच वर्षदेखि काम गर्दैछौं र यो नेपाली चिन्हारीले हामीलाई धेरै आदर–सत्कार मिलेको छ। ‘नेपथ्य’ जस्तो नेपाली ब्यान्डले संसारका ठूलठूला सहरका ख्यातिप्राप्त ठाउँहरूमा कार्यक्रम गर्ने गर्छ। दीपक रौनियारको सिनेमा न्युयोर्कका हलहरूमा हेर्न सकिन्छ। नेपाली अनुहारहरू संसारका बिभिन्न टेलिभिजन स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ भने नेपालीहरू अब भारतका पुस्तक प्रकाशक गृहहरूमा सम्पादकका रूपमा भेटिन्छन्। भारतीय फिल्म र टिभीदेखि अमेरिकाका रंगमञ्चमा नेपालीहरू देखिन थालेका छन्। २०–२५ वर्षअघि नेपालीहरूको विदेशमा पहिचान गोर्खा सैनिकको रूपमा प्रचलित थियो भने अहिले विविध पहिचान बोकेर नेपालीहरू संसारमा चिनिन थालेका छन्। तर प्रश्न छ, कसरी यो पहिचानलाई समेटेर विश्वमा नेपाली चिन्हारीको काँचुली फेर्ने?
नयाँ सोच, नयाँ पहिचान१५ वर्षअघि संसारमा चार–पाँच लाख नेपालीहरूको हितको निम्ति खोलिएको संस्था ‘एनआरएनए’ हाँकिरहेका हालका अध्यक्ष शेष घलेले नेपालीहरूको पहिचान परिवर्तनका लागि ‘भिजन–२०२०’ नाम दिएर अभियान थालेका छन्। नेपालीहरूको चिन्हारीमा परिवर्तन ल्याउने हो भने नयाँ पुस्तालाई समेट्न जरुरी छ। हामी नेपालीले अरू मुलुकबाट सिकेर स्वदेशमै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुको साटो नेपालमै उन्मूलन गर्नुपर्ने गलत बानी र आचार–व्यवहारसमेत विदेशतिर लगेका छौं। गतवर्ष एनआरएनएको अमेरिका, न्युजर्सीमा भएको कार्यक्रममा आसन ग्रहणको ताँती, नेपालमा जस्तै समयको वास्तै नगर्ने प्रवृत्ति, नेपालका राजनीतिक नेताहरू लगेर राजनीतिक भाषण चुट्न लगाउने, एमाले, माओवादी र कांग्रेसको रेखाले विभाजित समाजको झल्को देखाउने जस्ता घटनाहरू देख्दाम त स्तब्धै भएँ। अमेरिकालाई आफ्नो कर्मभूमि मानेर बसेका मेरा एक मित्रले सोधे, ‘मेरा छोराछोरीले यस्तोमा आएर के गर्ने? के सिक्ने?’
नेपालीहरूको जनसंख्या नेपाल बाहिर द्रुतगतिले बढ्दैछ। कतारमा नेपाली जनसंख्या भुटानको कुल जनसंख्याभन्दा बढी भइसक्यो। नेपाल बाहिर रहेका ४०–५० लाख नेपालीहरू अब दुई भागमा विभाजित छन्। एउटा सानो समूह, जो नेपालमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य कहिल्यै साकार हुन नसकेकाले विदेश पुगेर त्यहीं नेपाली संस्थाहरू खोलेर पुरानो धोको पूरा गर्नेमा लागेको छ। अर्कोले चाहिँं नेपाली चिन्हारीलाई घरमै थन्काई परिवारजन र साथीहरूको सानो समूहबीच आफ्नो चिन्हारी साँचेर राख्ने गर्दैछ। अमेरिकामा हुर्केर त्यहीं एउटा ठूलो बैंकको ठूलो पदमा रहेका व्यक्तिले मलाई भने, ‘दाइ, म एनआरएनएको वेबसाइटमा जान्छु, सबै नेपालीमा छ, केही बुझ्दिन। मलाई नेपाल र नेपालीहरूका निम्ति केही गर्न मन छ, तर मलाई न लामो भाषण हुने कार्यक्रममा जान मन छ, नत चुनावको राजनीतिमा होमिन।’
अबको नेपाली पहिचान भनेको यी ‘ग्लोबल नेपाली’हरू हुन्, जसले संसारको कुनाकाप्चामा गएर हामी पनि विश्वको सबभन्दा श्रेष्ठ काम, पद वा व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने सामथ्र्य राख्छन् र आफू नेपाली भएकोमा गौरव पनि गर्छन्। अब नेपालीहरूको यो चिन्हारी संसारसामु पेस गर्ने नयाँ अभियानकर्ताहरूको खाँचो छ। घाँटीमा माला, अनुहारमा अबिर, छातीमा ब्याज र आसन ग्रहणको फितुरो गर्नेहरूले सायद योगर्न सक्दैनन्।
नेपाल फर्कनुपर्ने बेला सहकर्मी राजेश श्रेष्ठले मलाई सोच्न बाध्य पार्ने कुरा राख्यो– हामी नेपालीहरूको आफ्नो राष्ट्रियता झल्काउने एउटा दिन पनि भएन। हुन पनि हो, हामी रुवान्डामा हुँदा होस् वा कम्बोडियामा वा अमेरिकामा, सोच्छौं– अन्य मुलुकहरूले झैं हामीले पनि नेपालको राष्ट्रिय दिवस भनेर, मानिसहरू बोलाएर, रातो चन्द्र फहराएर, सयौं थुंँगा बजाएर, नेपाली परिकार पस्केर आफ्नो देशलाई चिनाउन पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। तर राजेशले भनेझैं त्यो कुन दिनलाई मान्ने– फागुन ७? गणतन्त्र दिवस? वा संविधान दिवस? यी तीनमध्ये एक वा अर्कै कुनै दिनलाई नेपालको ‘नेसनल डे’ वा राष्ट्रिय दिवस बनाउनुपर्‍यो, जुन दिनलाई संसारभरिका नेपालीहरूका निम्ति आफ्नो राष्ट्रियता र पहिचान सम्झने/सम्झाउने अवसर बनोस्।
कोलकातामा पढ्दाताका सन् १९८७ को साफ गेम्समा नेताजी इन्डोर स्टेडियममा नेपाली खेलाडीहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा लहराएर सानो समूह भए पनि ‘रातो चन्द्र र सूर्य...’ गाएर त्यस बखतको युवा रगत तातेको झझल्को अहिले पनि आउँछ। हामीलाई राष्ट्रिय चिन्हारीको खाँचो छ। संसारभरिका नेपालीहरूलाई जोड्ने सञ्जालको खाँचो छ। फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज, नकारात्मक सन्देशहरूको बाढीभन्दा सकारात्मक नेपाल निर्माण गर्नसक्ने सोचहरूको खाँचो छ।
संसारमा त्यस्तो मुलुक विरलै होला, जहाँ विदेशमा बसोबास गरेर फर्केकाले देशलाई अघि बढाउन मद्दत नगरेका हुन्। हामीकहाँ २०४६ पछि विदेशमा बस्न सक्ने र बसिसकेकाहरू नेपाललाई नै कर्मथलो बनाएर फर्के। र धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याए– स्वास्थ्य, मिडिया, शिक्षा, प्रविधि आदिमा। अहिले नेपालको पछिल्लो संक्रमणकालको अन्त्य हुनलागेको छ। विदेशमा दक्षता हासिल गरेका नेपालीहरू अब फेरि स्वदेश फर्केर इतिहासको नयाँ अध्याय लेख्न तयार हुनुपर्छ।
प्रकाशित : आश्विन ५, २०७४ ०७:१७
डा. राजेन्द्र कोजु
लघुवित्त सुध्रिन जरुरी